Natural vitamina E Dry Powder
Ningbo Dahongying Bioengineering Co., Ltd. (Est.1998) dia tanàna ao amin'ny Ningbo - ny foibe ara-toekarena any atsimon'i Yangtze River Delta. Ny hoe mikatona ho Ningbo Port ao amin'ny atsinanana, ary manana tombontsoa ara-jeografika lehibe araka izay miatrika Shanghai ao avaratra. Ny Company dia maitso sy ny tontolo iainana-namana orinasa in Biotech orinasa, ary nahazo anaram-boninahitra maro tao anatin'ny taona vitsivitsy, dia maro ihany koa ny loka nanana amin'ny sehatry ny tena fanavaozana, angovo famonjena, fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiantrana-bahoaka.
Ny orinasa no voalohany mpanamboatra ny Natural VE any Shina, ary efa manokana amin'ny famokarana Natural VE ho am-polo taona ny taona maro. Tsy ny tsara Mifantoka amin'ny fanomezana sakafo ara-pahasalamana amin'ny nitarika teknika sy ny kalitao miavaka amin'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao. Nanomboka ny fananganana, ny Company miraikitra amin'ny fitantanana sy ny rafitra manatanjaka fanavaozana. Miorina amin'ny ny fitantanana hevitra ny olombelona miorina, dia nanorina ny Company feo antoka tsara rafitra mba hiantohana ny kalitao avo vokatra.
Na dia tanteraka ny Company tantara be voninahitra, dia mbola lavitra ny lalana ho any amin'ny ho avy. Raha tsy tamin'ny alalan'ny teknolojia mandroso sy manan-karena traikefa fitantanana, miaraka amin'ny endri-javatra ara-panahy ny "Green, Healthy sy Happy", no hanatratra ny tanjon'ny orinasa taloha taonjato-malaza eran-tany sy ny marika. Mino isika fa, amin'ny alalan'ny mazoto miasa, Dahongying ho tonga fiakaran'ny kintan'ny Natural VE.
Raha liana amin'ny vokatra na manana fanontaniana, Aza misalasala mifandray aminay. Manantena izahay hametraka fiaraha-miasa fifandraisana momba anareo ao amin'ny hoavy tsy ho ela.
Beihai NO.166 ROAD XIEPU ZHENHAI faritra 315204, Ningbo City, Zhejiang Province, CHINE
Mr.Allen Masoandro +86 13567908958